ITIL အဘိတ်စာမေးပွဲ -4»၎င်းတို့အား Tech မှကျောင်း
ITIL အဘိတ်စာမေးပွဲ - 4
0 ပြီးစီးခဲ့ 40 မေးခွန်း
အားလုံး 40 မေးခွန်းများကိုကြိုးစားခဲ့ရပါမည်
သငျသညျဤစာတမ်းဖြည့်စွက်ရန် 60 မိနစ်တို
သင်သည်ဤစာမေးပွဲသွားမယ့်ဖြစ်နိုင်သမျှ 26 အမှတ် (40%) ထဲက 65 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအောင်မြင်ရန်ရမယ်
ပဟေဠိ loading ဖြစ်ပါတယ် ...
သင်၌လက်မှတ်ရေးထိုးဒါမှမဟုတ်ပဟေဠိကိုစတင် sign up ကိုရပေမည်။
0 of 40 မေးခွန်းများကိုမှန်ကန်စွာဖြေကြား
သငျသညျရောက်ရှိပါပြီ0of0မှတ်, (0)
သငျသညျကိုအောင်မြင်စွာပြီးစီးခဲ့ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ် ITIL ကဲ့ရဲ့စမ်းသပ်ခြင်း
မေးခွန်း 1 of 40
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှု (PBA) ၏ပုံစံ၏ဥပမာတစ်ခုဘယ်ဟာမဖြစ်သနည်း
မေးခွန်း2of 40
မေးခွန်း3of 40
ဘယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမေတ္တာရပ်ခံစံန်ဆောင်မှုများ၏အစိတ်အပိုင်းများကို sourcing နှင့်ပို့ဘို့တာဝန်ရှိပါသလဲ
မေးခွန်း4of 40
မေးခွန်း5of 40
မေးခွန်း6of 40
မေးခွန်း7of 40
မေးခွန်း 8 of 40
မေးခွန်း9of 40
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိစ္စများတွင်သာထောက်ခံမှုများနှင့်ရန်ပုံငွေ secure ဖို့အဆိုပြုစီမံကိန်းဘဏ္ဍာရေးသက်ရောက်မှုအပေါ်အာရုံစိုက်သင့်တယ်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိစ္စများတွင်သာသင့်လျော်သောအဆင့်မြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုထောက်ခံမှု secure ဖို့အဆိုပြုစီမံကိန်း၏ non-ဘဏ္ဍာရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသက်ရောက်မှုအပေါ်အာရုံစိုက်သင့်တယ်
မေးခွန်း 10 of 40
မေးခွန်း 11 of 40
မေးခွန်း 12 of 40
အသစ်ကသို့မဟုတ် Chang ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သွေဖီ, အန္တရာယ်များနှင့်ပြဿနာများကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်
မေးခွန်း 13 of 40
မေးခွန်း 14 of 40
မေးခွန်း 15 of 40
ဝန်ဆောင်မှုဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်း၏ဘယ်ဇာတ်စင်နေ့က-to-နေ့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများအပေါ်ဝန်ဆောင်မှုပြတ်တောက်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို minimize လုပ်?
မေးခွန်း 16 of 40
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုယူနစ်အတွင်း embedded ကြောင်းတစ်ခုပြည်တွင်းရေး service provider က
မေးခွန်း 17 of 40
မေးခွန်း 18 of 40
မေးခွန်း 19 of 40
ဘယ် service ကိုအကူးအပြောင်းဖြစ်စဉ်ကိုသတင်းအချက်အလက်သို့ data တွေကိုပြောင်းလဲအကြောင်းကိုလမ်းညွှန်မှုကိုထောက်ပံ့ပေး?
Service ကိုပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် configuration စီမံခန့်ခွဲမှု
မေးခွန်း 20 of 40
1 နှင့် 2
2 နှင့် 3
3 နှင့် 4
1 နှင့် 4
မေးခွန်း 21 of 40
အဘယ်မှာရှိအဖြစ်အပျက် resolution ကိုပစ်မှတ်မှတ်တမ်းတင်ခံရသင့်သလဲ
မေးခွန်း 22 of 40
ဝန်ဆောင်မှုတိုးတက်မှုအစီအစဉ် (SIP) ၏တိုးတက်မှုနှင့်အောင်မြင်မှုပြန်လည်သုံးသပ်ရပါမည်
မေးခွန်း 23 of 40
ဝန်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအလိုအလျောက် အသုံးပြု. ဝန်ဆောင်မှု utility ကိုတိုးတက်အောင်၏ဥပမာတစ်ခုဘယ်ဟာပါလဲ?
ဝန်ဆောင်မှုတောင်းဆိုမှုကို၏ pre-စိတ်ပိုင်းဖြတ် routing ကို
ဝန်ဆောင်မှု data တွေကို compile ဖို့အချိန်လျှော့ချ
မေးခွန်း 24 of 40
configuration ကိုပစ္စည်းများအားလုံးကိုအပြောင်းအလဲများအတွက် configuration စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အတှငျမှတျတမျးတငျထားသဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတုံ့ပြန်နှင့်အိုင်တီစီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်အတူန်ဆောင်မှု align လိမ့်မည်ဟုအပြောင်းအလဲအတွက်တောင်းဆိုဖို့
မေးခွန်း 25 of 40
မေးခွန်း 26 of 40
မေးခွန်း 27 of 40
ဝန်ဆောင်မှု catalog စီမံခန့်ခွဲမှု၏နယ်ပယ်အတွင်း၌အဘယ်အရာဖြစ်သည်မဟုတ်လော
ဝန်ဆောင်မှု catalog နှင့်ဝန်ဆောင်မှုအစုစုအကြား interfaces
မေးခွန်း 28 of 40
internal ဖောက်သည် service provider ကကဲ့သို့တူညီသောအဖွဲ့အစည်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း
မေးခွန်း 29 of 40
ဝန်ဆောင်မှုဒီဇိုင်းကိုအထုပ် (SDP) အဘို့အဘယ်သို့ထုတ်လုပ်သင့်သလဲ
1 နှင့် 3
2 နှင့် 4
မေးခွန်း 30 of 40
အဘယ်အရာကိုသက်တမ်းကဒီမှာသတ်မှတ်ပါတယ်: 'တစ်ခုလုပ်ပိုင်ခွင့်, စီစဉ်ထားသို့မဟုတ်ထောက်ခံဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအစိတ်အပိုင်းနှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်စာရွက်စာတမ်းများများ၏များအပြင်, ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်း' '?
မေးခွန်း 31 of 40
ဝန်ဆောင်မှုဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်း၏ဘယ်ဇာတ်စင် catalog စီမံခန့်ခွဲမှု, သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ပါဝင်သည်?
မေးခွန်း 32 of 40
တစ်ဦးကလူသိများအိုင်တီဝန်ဆောင်မှုပုံမှန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနာရီအတွင်းဖျော်ဖြေရပ်, ထို့နောက်အိုင်တီဝန်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူန်ဆောင်မှုစားပွဲပေါ်မှာတောင်းဆိုထားသည်။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုစားပွဲပေါ်မှာအဘယ်အရာကိုဖွင့်လှစ်သင့်သလဲ
မေးခွန်း 33 of 40
မေးခွန်း 34 of 40
ဘယ်လုပ်ငန်းစဉ်သည်သို့မဟုတ် function ကိုအိုင်တီအခြေခံအဆောက်အအုံအတွက်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဖြစ်ရပ်များစောင့်ကြည့်ဘို့တာဝန်ရှိပါသလဲ
မေးခွန်း 35 of 40
အကောင်အထည်ဖော်မှုပြီးနောက်ပေမယ့် post ကိုအကောငျအထညျဖျောပြန်လည်သုံးသပ်မတိုင်မီ
မေးခွန်း 36 of 40
multi-level ကို SLA ၏အစိတ်အပိုင်းဘယ်အဆင့်အထိမဖြစ်သနည်း
မေးခွန်း 37 of 40
တစ်ဦးအိုင်တီဝန်ဆောင်မှု၏စီမံခန့်ခွဲမှုအဘို့အဓိပ်ပာယျရှိသည်သောပြည်နယ်၏အပြောင်းအလဲများကို detect လုပ်ဖို့
ကြောင့်တားဆီးမရနိုငျသောဝန်ဆောင်မှုမအောင်မြင်မှုများမှဖြစ်စဉ်များများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို minimize လုပ်ဖို့
မေးခွန်း 38 of 40
အိုင်တီန်ဆောင်မှုများ၏ဒီဇိုင်းကို 'လေးဆာ' ၏ထိရောက်မှုနှင့်အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုခြင်းကိုလိုအပ်သည်။ ဤအ '' လေးဆာ 'ဘာတွေလဲ?
လူများ, လုပ်ငန်းစဉ်သည်, မိတ်ဖက်, စွမ်းဆောင်ရည်
performance, လုပ်ငန်းစဉ်သည်, ထုတ်ကုန်, အစီအစဉ်များ
လူများ, လုပ်ငန်းစဉ်သည်, ထုတ်ကုန်, မိတ်ဖက်
လူများ, ထုတ်ကုန်, အစီအစဉ်များ, မိတ်ဖက်
မေးခွန်း 39 of 40
ပြေလည်ဖြစ်ရပ်များ၏ပိတ်သိမ်းစပ်လျဉ်း ITIL လမ်းညွှန်မှုကဘာလဲ?
မေးခွန်း 40 of 40
အစဉ်အမြဲဝန်ဆောင်မှုတိုးတက်မှု (CSI) ချဉ်းကပ်မှုအတွက်ခြေလှမ်းများ၏မှန်ကန်သော set ကိုဘယ်ရှိပါသလဲ
မဟာဗျူဟာအကြံကိုကြံစည်; ဖြေရှင်းချက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ; ထုတ်လုပ်မှုသို့အကူးအပြောင်း, ဖြေရှင်းချက် Operate; အစဉ်မပြတ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်
ကျနော်တို့ဖြစ်ဖို့အဘယ်မှာရှိချင်ကြဘူး ?; ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှိရပါဘူး ?; ဘယ်လိုကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိစစ်ဆေးကြဘူး ?; ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအရှိန်အဟုန်ဆက်ဆွဲသွားသလဲ?
လိုအပ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရလဒ်များခွဲခြားသတ်မှတ်; ရလဒ်များအောင်မြင်ရန်ဖို့ဘယ်လိုစီစဉ်; ဒီအစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖေါ်; ဒီအစီအစဉ်ကိုစနစ်တကျအကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည် Check; ဖြေရှင်းချက်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်
ထိုရူပါရုံဘာလဲ ?; အခုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာလဲ?; ကျနော်တို့ဖြစ်ဖို့အဘယ်မှာရှိချင်ကြဘူး ?; ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှိရပါဘူး ?; ကျနော်တို့အဲဒီမှာ get ခဲ့ဘူး ?; ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအရှိန်အဟုန်ဆက်ဆွဲသွားသလဲ?
မူပိုင်ခွင့်© 2017 - All Rights Reserved - ဆန်းသစ်သောနည်းပညာ Solutions | ကိုယ္ေရးအခ်က္ လံုျခံဳမွု ေပၚလစီ